နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Sleeping iPhone
စဉ်းစားမှုမပါဘဲ သင်ယူသော ပညာသည် အချည်းနှီးဖြစ်၍ ၊ ပညာမရှိဘဲ စဉ်းစားခြင်းကား အလွန် အန္တရာယ်ကြီးပေသည်။ (ကွန်ဖြူးရှပ်)
ပစ်လိုက်ရပြီလို့ထင်ထားတဲ့ iPhone3Gs လေးကို မထင်မှတ်ပဲ ပြန်ကယ်တင်လိုက်နိုင်လို့ ကျွန်တော် ခုမှ သက်ပြင်းချနိုင်ပါပြီ... iPhone 3Gs (New Bootrom) ကို iOS 4.3.5 ကနေ 4.3.3 ကို Downgrade ဆင်းရာမှာ Error(37) တက်ပြီး ဘာမှ ဆက်လုပ်၍ မရလို့နောက်ဆုံးမှာ iOS 4.3.5 ကိုသာ Restore ပြန်လုပ်ရပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက် သုံး/လေးရက်လောက်မှာ error(37) ကို Fix လုပ်တဲ့ နည်းကိုတွေ့ ရှိခဲ့ပြီး ဒီနေရာမှာ Update အနေနဲ့ထပ်မံ ရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်။
ယင်းနည်း နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်၍ iPhone 3Gs (New Bootrom) ကိုပဲ နောက်ထပ် Downgrade ချကြည့်ခဲ့ရာ အားလုံး အဆင်ပြေပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ DFU mode ကမထွက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်၊
ဘယ်နှစ်ကြိမ် ပြန်လုပ်လုပ် ဒီအဆင့်မှာ တစ်နေပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာ Redsn0w 0.9.9b1 (New version) မှာပါဝင်တဲ့ "Fix Recovery" ကို သုံးလိုက်တော့မှ ဖုန်းက ပြန်ပြီးတက်လာပါတယ်။
အတော်လေး ဝမ်းသာသွားပါတယ် အကြိမ်များစွာ ကျဆုံးခဲ့တာဆိုတော့.... Setting ထဲဝင် စစ်လိုက်တော့လဲ Firmware 4.3.3 ပြနေတယ်။ အိုခေသွားပြီပေါ့ဗျာ ဒါနဲ့Cydia ထဲ source တွေထည့်၊ မြန်မာဖောင့်တွေသွင်းပေါ့လေ....
iTunes နဲ့သီချင်းလေးတွေသွင်းဦးမှ ဆိုပြီး Music Library ထဲကို သီချင်းလေးတွေ ပြင်ဆင် iPhone လေး ဘေးချလို့ ပေါ့၊ ပြီးလို့Sync လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းလဲ ကောက်ကိုင်လိုက်ရော Black Screen (လုံးဝ ဖုန်းပိတ်ထားသလို) မျိုးဖြစ်နေပါလေရော....
Battery များ ကုန်သွားလာဆိုပြီး PC နဲ့ လဲချိပ်ကြည့်ရော iTunes က Restore လုပ်ပါဆိုပြီး တက်လာပါတယ် ဒါနဲ့ထုံးစံအတိုင်း Original firmware 4.3.5 ကို Restore ပြန်လုပ်တာပေါ့.....
အဲဒီမှာတင် ဇာတ်လမ်း စတော့တာပဲ 4.3.5 Restore ပြီးခါနီးရင် error (1601) နဲ့error ပေါင်းစုံတက်တယ် နောက်ဆုံး error(28) ဆိုတာတောင် တက်တယ် (error 28 က Hardware ပျက်နေရင် တတ်လာတဲ့ error မျိုး) ဖုန်းက wrantty ကုန်သွားပြီ ဆိုတော့ နောက်တစ်လုံး သွားပြန်လဲလို့ လဲမရ၊ နည်းပေါင်းစုံနဲ့Exit Recovery, Exit DFU လုပ်တယ်..
ဖုန်းက screen မှာ မီးရောင်လေး တစ်ချက်တောင် မသန်းဘူး (ဒီလိုနဲ့ ) ည ၂ နာရီ ထိုးသွားပြီ၊ မနက် အလုပ်ဆင်းရဦးမယ် နာရီကို Alam ပေးပြီး အိပ်လိုက်တယ်... အိပ်မပျော်ဘူး စိတ်ကူးနေတယ် အဖြေရှာနေတယ် ဘာကြောင့်လဲ....??????
အလုပ်ထဲမှာ တစ်နေကုန် ခေါင်းက နောက်ကျိနေတယ် အချိန်ရရင် အဖြေထုတ်ကြည့်တယ်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ချက်ချင်း ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်ပြီး စဉ်းစားထားတာတွေ နဲ့ပြန်ကြိုးစားကြည့်တယ်၊ Custom Restore IPSW များ error ဖြစ်နေလား ပြန်စစ်၊ မသင်္ကာလို့ (ရှိပြီးသားကိုပဲ) ပြန် download ထပ်လုပ်နဲ့Desktop မှာလဲ ပွရှုပ်လို့ ...။
Limera1n,RedsnOw,iReb,RecBoot,Green poisiOn,Libus,etc.... တော်တော်စုံသွားပြီ... မောလည်း မောပြီ....
ကျွန်တော့် site မှာ ရေးစရာ အကြောင်းရာသစ်တွေ ရှိနေပေမယ့် မရေးနိုင်သေးဘူး mail နဲ့မေးထားတာတွေလဲ အချိန်လုပြီး ပြန်ဖြေ နဲ့ ဥာဉ့်နက် သွားပြန်ပါလေရော..
ဒါပေမယ့် ပထမ ညကလောက် စိတ်မပူတော့ဘူး (ဘာကြောင့်လဲ) ဒီည ကျွန်တော် Tool တစ်ခုနဲ့စမ်းလိုက်တာ iPhone screen မီးလင်းလာတယ် ဒါပေမယ့် ရှေ့ ဆက်မတက်ဘူး (ပန်းသီးပုံ) လေး မမြင်ရတာ ၃ ရက်ရှိသွားပြီ ....
ဒီနေ့အလုပ်က စောစောပြန်ရောက်တယ်.... iTunes နဲ့iPhone ချိပ်ပြီး နေ့ လည်က စဉ်းစားထားသလို iOS4.1(IPSW) ကို Restore ချလိုက်တယ် မနေ့ ညကလိုပဲ screen မီးလင်းလာတယ် ရှေ့ မတက်ဘူး iTunes error တက်တယ်....
ရတယ်... တစ်ဖြည်းဖြည်း iOS နှိမ့်ပြီး Restore လုပ်သွားလိုက်တာ iOS3.1.3 နဲ့ လည်း စမ်းရော ပန်းသီးလေး တက်လာပါလေရောဗျာ..... ပျော်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့ တော့ (ဟုတ်တယ်) စိတ်ဓါတ်က ကျနေပြီ၊ ပြီးတော့ Hardware ပိုင်းများ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားပြီလားလို့သံသယက ဝင်နေပြီလေ...
Restore လုပ်လို့ပြီးခါနီးမှာ error (1015) တက်လာပြီး "Recovery mode" ဖြစ်သွားတယ်... ဘယ်ရမလဲ TinyUmbrella က TSS server ကို stop လုပ်ပြီး "Exit Recovery" ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာ တစ်ခါထဲ ထွက်သွားပါလေရော၊
iTunes ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ iPhone က iOS3.1.3 ဖြစ်သွားပြီ... ဖုန်းကို Power ON/OFF ဘာပြဿနာမှ မရှိပဲ ပုံမှန်ပြန်ရသွားပါတယ်....
ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်လို့DFU mode ပြောင်း TinyUmbrella Run ပြီး iTunes ကနေ iOS4.3.3 ကို Restore ပြန်လုပ်ပေမယ့် ဟိုးးးး ပထမနေ့ က အခြေနေကို ပြန်ရောက်သွားပါတယ်... ဒါနဲ့3.1.3 ပြန်ဆင်း iOS 4.1 အထိ မြှင့်ပြီး Restore လုပ်ပါသော်လည်း မရတော့တဲ့ အတွက် iOS4.3.5 ကို Restore ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်...
4.3.5 မှ 4.3.3 ကို Downgrade ဆင်းရာတွင် iPhone 3Gs (Old Bootrom), iPhone 3Gs (New Bootrom), iPhone4တို့ ၏ တွေ့ ကြုံရသော error များ ကွဲပြားနိုင်၍ အထူးသတိပြု လုပ်ဆောင်ကြပါရန် အသိပေးလိုပါသည်။
ဤမျှသာ... အခမဲ့ ဆိုတဲ့ အရာရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့ မရနိုင်တဲ့ တန်းဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်....
Posted by P Kyaw Swa at 4:31 PM
Ubuntu Myanmar LoCo Team
Ghost Area မှ ကြိုဆိုပါတယ်
ဖုန်း Application များ freedownload ရယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ Cracker Group
မြန်မာဘလော့ဂါများရဲ့ Post များကိုဖတ်ရန်
တင်ထားသမျှ Post များ
► October 2011 (223)
Facebook ကို Gmail မှာ ထည့်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်
iPhone, iPad, iPod Touch တို့ တွင် iTunes မလိုဘဲ M...
Creating an iTunes App Store account withoutacre...
Create Free iTunes Account without Credit Card (1)...
Best free Windows Software အစုံအလင်စုစည်းဖော်ပြပေး...
Memory Stick မှာမကြာခဏတွေ့ တတ်သော Virus များရှင်းန...
Gmail Hacking with Phishing method
Hacking, DDoS နှင့် လူနှစ်ဦး
iPhone အတွက် Free Applications နှင့် Games များထည်...
Moo0 RightClicker Pro 1.46 Multilingual
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ မှတ်တမ်း): iPhone.Backup.Ex...
ဖုန်းကို Webcam အဖြစ်သုံးမယ်
Install firefox7stable in Ubuntu 11.10/10.04/10....
Huawei C8600 ကို Android version 2.3.5 သို့အလွယ်ဆု...
iPhone, iPad နှင့် Apple ထုတ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်...
အသစ်ထွက် Android ဂိမ်း Angry Birds Seasons HD v1.3...
Hacking လို့အော်သံတွေမကြာမကြာကြားနေရလို့ ..စိတ်ဝင်...
Networking step-2 : NIC, MAC, IP and Connection
Networking part-1 : Making LAN Cable
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): computer service သမားများအတွက်...
Panda Cloud Internet Security 2012 @Panda Cloud An...
မိမိ မရှိတဲ့ အချိန် Computer ကို ဘယ်သူ သုံးလဲ
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): laptop ပြုပြင်နည်းနှင့်သိသင့်စ...
December Mgmg: Logo လုပ်လိုသူများ အတွက် ဝက်ဆိုဒ်မျ...
ကိုယ်ယောင်ဖျောက်မယ် ပုန်းမယ် အခြားကိုယ်နဲ့လိုင်မှာ...
Hacking 800 Tutorials
Hacking 200 TutoriaLs
Net Cut ဆိုတာသုံးကြည့်ချင်ရင်
WIFI Password ခိုးနည်းလေး
Laptop Driver တွေအတွက်စိတ်မညစ်နဲ့ တော့....
internet ဖုန်း call ကိုViber နဲ့အခမဲ့ပြောကြမယ်
Facebook နဲ့ Mail နာမည်ကို လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
Network စိတ်ဝင်စားရင် မြန်မာလို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေး...
Google Earth 6.1 released
Hacking ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူများအတွက် ဆိုဒ်ပါ...
Hardware လေ့လာဖို့အထောက်အကူပြု ဆိုဒ်ပါ....
နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ကျူတိုရီရယ် site များ
Bios password Bypass and Reset
Ubuntu 11.10 Beta2Released, Reviewed
Blink hacker group ဖျတ်သိမ်းမယ်။
ကိုယ့်/သူ့ Computer Hard Disk ကို Format လွယ်လွယ်ခ...
Myanmar Computer Ebook Downland (လိုချင်ဒေါင်းပေါ့...
လေ့လာစရာ Photoshop Websites
Password နဲ့ ပတ်သတ်လို့ သိထားသင့်တာများ
ESET Anti-virus နှင့် offline-update ထည့်နည်း
NOD32 KEYS 20 SEPTEMBER 2011
Avast! Pro Antivirus6+ License Key Expiry Date 2...
Computer ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြန်စေဖို့ Uniblue_...
Ubuntu / Kubuntu ကို Window ပေါ်မှ Installation / U...
Windows 8 မှာ Shutdown, Restart နဲ့Sleep ကိုဘယ်လ...
Window မှာသုံးတဲ့ Software တွေ Linux မှာရောသုံးလို...
အန္တရာယ်အသံကို ခွဲခြားစီစစ်ပေးနိုင်သော CCTV နည်းပညာ...
Ethical Hacking Basic Training (ညီနေမင်း-နည်းပညာ)
အလွယ်ကူဆုံး window admin password ကို ဖျက်ကြည့်ချင...
Internet Download Manager 6.07 Build 11 အတွက်အဆင်ေ...
အသုံးဝင်သော Command များ
Myanmar Year 100 Calendar
Laptop Driver လိုအပ်လာရင်
Windows 8 မှာ Myanmar Unicode ကို Built in အနေဖြင်...
အားလုံးအတွက် Free Download Software များ
software နှင့် တစ်ခြား ရှာချင်တာများကို ဘယ်လို ခဏေ...
HardDisk ရဲ့ Size အမှန်ကို တွက်ချက်နည်း
Youtube video တွေကိုကြည့်လို့ရပါပြီ......
ADSLအင်တာနက် လိုင်းကို ကနဦးတပ်ဆင်ခ ငွေ ကျပ် ၁၅ သိ...
Penetration Testing and Network Defense
IP & Subnets အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
UBUNTU အကြောင်း U4MM မှာတင်ထားသော Post များစုစည်းတ...
USB Stick ဖြင့် Dual bootable Window ဖန်တီးခြင်း။
ကျနော်လဲ Ubuntu ဘက်မှာလည်နေတာဗျာ...ဟာဟ..ကျေးဇူးပါဗ...
လာရောက်လည်ပတ်သူအပေါင်း... မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ၊ နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝကြပါစေ...... ကျေးဇူးတင်ပါသည်... ဘယ်ဖက်အပေါ်ထောင့်မှာ Zawgyi-Unicode Converter Box တင်ပေးထားပါတယ်။ ပြောင်းလဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား......
Member Register Ubuntu for Myanmar အတတ်ပညာနဲ့ အသိပညာ မျှဝေကြပါစို့
Ataris VCS Delayed, But Does Anyone Even Care?
Guía de los mejores Paseos en Monterrey
Ubuntu for Myanmar
Myanmar National Anthem
ပွောဆို ဆှေးနှေးခွငျးမြား - MYSTERY ZILLION
Which version install Cent OS for beginner?
မြန်မာ Mobile Application Store
OnePlus6ကို Avengers :Infinity War Limited-Edition နဲ့လည်းထုတ်မည်
၂ မြိုးမွငျဖောငျ့ Zaw Decode
How to Install Gnome-Pie 0.6.5 in Ubuntu 15.10, 15.04, 14.04
Welcome to Myanmar Photoshop Tutorials
My Life Blog | Steps of Life
Myanmar IT Men
Internet Download Manager 6.07 Build 11 အတွက်အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
Myanmar Computer Ebook Downland (လိုချင်ဒေါင်းပေါ့ဗျာ)
software နှင့် တစ်ခြား ရှာချင်တာများကို ဘယ်လို ခဏလေးနဲ့ ရှာရမလဲ
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ မှတ်တမ်း): မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook အမြောက်အများ ဒေါင်းလိုပ...
Windows7(64bit) အတွက် Zawgyi Font ပြဿနာအားဖြေရှင်းကြည့်ခြင်း
Hard Drive နှစ်လုံးကို Clone ရိုက်ချင်သူများ အတွက်
Internet Download Manager 6.07 Build 14 Final
Python လလေ့ာကွမယျ အပိုငျး​ (၄)
ကျနော်ကြိုက်သော BLOG များ
မြန်မာ IT Men
Information & Technology Network
Eleven Media Group အွန်လိုင်းဂျာနယ်။
BackTrack5(2)
Firefox Add-ons (3)
Portable USB (3)
Window7(19)
Window 8 (7)
ကိုညီနေမင်း၏ကျော်ခွရန် web proxy များ
http://nyinayminproxy1.appspot.com http://nyinayminproxy2.appspot.com http://nyinayminproxy3.appspot.com http://nyinayminproxy5.appspot.com http://nyinayminproxy6.appspot.com http://nyinayminproxy7.appspot.com http://nyinayminproxy8.appspot.com http://nyinayminproxy9.appspot.com http://nyinayminproxy10.appspot.com
ONLINE CASINOS IN IRELAND | Flag counter | Roulette | Shaving Razor | Amigafx
နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ. Theme images by Jason Morrow. Powered by Blogger.